Posted by တန်ခူး at 5:03 PM
သြော်…တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ငွေကြေးအားဖြင့် မချမ်းသာတောင် စိတ်တော့ ပျော်ရွှင်ချမ်းသာနိုင်မှာပေါ့လေ။
အဲဒါကြောင့်ပြောကြတာနေမှာ။….အရာရာဟာ ငွေကြေးနဲ့ချည်း တိုင်းတာလို့မရဘူးဆိုတာလေ။
ပျော်ရွှင်မှုတို့ လွတ်လပ်မှုတို့ဆိုတာ တကယ်တမ်းကျတော့ ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့ သိပ်တော့လည်း မသက်ဆိုင်လှပေဘူး။ တချို့ဆို သန်းပေါင်းများစွာ ပိုင်တာတောင် ဥရောပနဲ့ အမေရိကားမှာ ဈေးဝယ်မထွက်နိုင်လို့ စိတ်ညစ်နေကြရရှာတာကလား။
မတန်ခူးရေ.. အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းလေး ယှဉ်ပြပြီး ရေးသွားတာ တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အပြင်မှာလည်း အဲဒီလို အိမ်ထောင်ရေးတွေမြင်နေတွေ့နေရတယ်။ ဒါပေမယ့်လေ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ကြတာ မို့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာကို အချိန်က ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါနော်...
marriage is lottery တဲ့ ငယ်ငယ်က CTO စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဆရာလုပ်တတ်ပါသည်။
အခုလဲ ကြောက်ပါသည်။ ဟီး..
စကားမစပ် အမရေ... လက်ထပ်ပီးတဲ့ ယောင်္ကျားတွေက သူတို့မိန်းမတွေအားလုံးကို Virus girl တဲ့..သိလား..။ မကောင်းဘူးနော်..။
ဖတ်လို့ကောင်းတယ် အစ်မရေ့ အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတာလေးကို ခိုင်းနှိုင်းဖော်ပြထားတာလေးကို သဘောကျတယ် ငွေဆိုတဲ့ ပူလောင်တဲ့ အရာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အေးမြမှု ယှဉ်တွဲလာတဲ့အခါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အသာရသွားတာပါပဲ ။
ဒီဝတ္ထုကို ကောင်မလေးတွေ ဖတ်သင့်တယ်ဗျ။ ကောင်မလေးတွေကို ဖတ်ဖို့ ညွှန်းလိုက်မယ်။ ခက်ခက်ကို လည်းဖတ်ဖို့ ညွှန်းရမယ်။ :D
အမ တန်ခူးရေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာလေးပါ။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ အမ အရေးအသားလေးတွေ အားကျမိတယ်။
:D mama yae..
hehe..me be ur manager naw..
reali nice to read..ur stories..
သိပ်မှန်တာပေါ့ကိုပေါရယ်… ဒါပေမယ့်လဲ အဲဒီငွေက ဘ၀တော်တော်များများကို လွှမ်းမိုးထားတုန်းပဲ….
ဟုတ်ပါတယ်နုရေ… မူယာနဲ့ ဖြူပြာလိုပေါ့…
မြတ်နိုးရေ… မေတ္တာစစ်တို့ မှန်လျှင် ငြိမ်းအေးစမြဲမို့မကြောက်ပါနဲ့ ညီမရေ…
မောင်မျိုးရေ… အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ မေတ္တာခိုင်မှ မြဲတတ်တာမျိုးမို့ ….
ဟုတ်ပါတယ် ကောင်းကင်ကိုရေ… ကြားနေမြင်နေရတဲ့ ဘ၀တန်ဖိုးဖြတ်မှုတွေ ရင်လေးလွန်းလို့ကောင်မလေးတွေ ဖတ်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ… ခက်ခက်က ပေးဖတ်စရာတောင် မလိုအောင် လိမ္မာပြီးသားဖြစ်မှာပါ…
ကျေးဇူးပါ မဇနိရေ… ကျွန်မက မောင်တထမ်း၊ မယ်တရွက် မဇနိတို့ blogလေးကို အားကျနေတာ…
diLoရေ… မြှောက်မပေးနဲ့ နော်… တော်ကြာ မန်နေဂျာကြီး ထွက်ပြေးနေရဦးမယ်..
အရှုံးပေါ်လို့ လေ…
ကျေးဇူးပါ မbsfရေ… နောင်လဲလာလည်ပါဦးနော်…